प्रतिष्ठानको कारबाहीविरुद्ध ‘बहिष्कार’ गीत बनाए दुर्गेशले – Classic Khabar
प्रतिष्ठानको कारबाहीविरुद्ध ‘बहिष्कार’ गीत बनाए दुर्गेशले
August 8, 2021 76
राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालले सो संस्थाको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी हटाएपछि गायक दुर्गेश थापाले सो निर्णयविरुद्ध ‘बहिष्कार’ गीत ल्याउन लागेको छन् ।
थापाले दुई साताअघि नयाँ तीज भाका बिच्च बिच्चमा–४ ‘ख्यास्स पुतली’ बजारमा ल्याएका थिए । यो शीर्षकमा गीत नल्याउन त्योभन्दा अघि नै राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले गायक दुर्गेश थापालाई आग्रह गरेको थियो । तर प्रतिष्ठानको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै दुर्गेशले यो गीतको भिडियो सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रतिष्ठानले यो शब्द अ’श्ली’ल भएको ठहर गर्दै गीतमा यो शब्द परिवर्तन गर्न लिखित निर्देशन दुर्गेशलाई दिएको थियो । तर दुर्गेशले सो निर्देशन मानेनन् । आफूले अ’श्ली’ल गीत नल्याएको उनले प्रतिष्ठानले स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको आइतबार बसेको कार्यसमितिको बहुमतले गायक दुर्गेश थापालाई सो प्रतिष्ठानको कलोसूचीमा राखेका छ । साथै उनलाई प्रतिष्ठानको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिएको छ ।
आफूलाई यसरी प्रतिष्ठानले बहिष्कार गर्दै कारबाही नै गरेपछि गायक दुर्गेश थापाले सो कारबाहीको विरुद्ध नयाँ गीत ‘कारबाही’ ल्याउन लागेको बताएका छन् । यसअघि आफूलाई धेरैले होच्याएर गीत गाउन नजान्ने भनेपछि आलुजस्तो गायक भनेर आफ्नै कमजोरी घोषणा गर्दै गीत निकालेका यी गायकको कथन छ । अहिले पनि आफूलाई बहिष्कार गरिएका कारण त्यसको प्रतिक्रिया स्वरमा बहिष्कार गीत निकालेको पनि यी गायकले बताएका छन् । अहिलेको पुस्ताको मागअनुसारको गीत आफुले ल्याउने गरेको र त्यस्तो गीत सबैलाई मन नपर्ने पनि यी गायकको दाबी छ ।
राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष रमेश बिजीले प्रतिष्ठानसँग अनाबस्यक इगो लिनुको सट्टा राम्रो गीत ल्याएर आफ्नो छवि अझ माथि बनाउन गायक दुर्गेश थापालाई सुझाव दिएका छन् । प्रतिष्ठानले लोकदोहोरी भाकालाई विकृत हुनबाट जोगाउन प्रयत्न गरिरहेकाले प्रतिष्ठानको सो निर्णयलाई अन्यथा नलिन पनि सुझाव दिएका छन् ।
आफूलाई प्रतिष्ठानले हटाएको चार दिनभित्रै गायक दुर्गेशले नयाँ गीत ‘बहिष्कार’ रेकर्ड गराएर यो गीतको पोस्टरसमेत बिहीबार सार्वजनिक गरेका छन् । गायक दुर्गेशले बिहीबार फेसबुकमा बहिष्कार शीर्षकको गीतको पोस्टर सार्वजनिक गरेका हुन् ।
गायक दुर्गेश थापालाई ख्यास्स पुतली गीतबाट महिलाको यतिबेला अपमान गरेको आरोप लागेको छ । उनले केटाको मात्र स्वरमा यो गीत ल्याएका हुन् । तीजमा केटाको मात्र स्वरमा तीज गीत गाउनुलाई कतिपयले तीज संस्कृतिको व्यंग्य भनेका छन् । यो गीतमार्फत महिलाको स्वतन्त्रतालाई हो’च्याएको आरोपक कतिपयले लगाएका छन् । तर त्यो प्रतिक्रियालाई दुर्गेशले स्वीकार गरेका छन् ।
आफ्नो गीत अ’श्लील नभएको र समय सान्दर्भिक रहेका यी गायकको दाबी छ । गीत निकाल्ने आफ्नो स्वतन्त्रतामाथि राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको पदाधिकारीले अंकुश लगाउने काम गरेका कारण बहिष्कार गीत जन्मेको पनि यी गायकको भनाइ छ । यो गीतको भिडियोको छायांकन तयारीमा जुटेका यी गायकले बहिष्कारलाई चाँडै नै बजारमा ल्याउने पनि बताएका छन् ।
Prevमकैबारीमा जंगली बँदेलको लागि छाडिएको बिजुलीको तारबाट करेन्ट लागेर दुई दाजुभाईको मृत्यु
Nextपाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, श्रावण २५ गते सोमबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
संखुवासभा घटना एकै परिवारका ६ जनाको ज्यान लिएको प्र,करणको स,नसनी खुलासा, मिल्यो केहि क्लु यस्तो रहस्य – भिडियो सहित खुल्दै
यिनै हुन् डीआईजी रञ्जितकारको नाम लिएर लाखौंको डिल गर्ने महिला ? डीआईजी सँगको सम्बन्ध के ?
१६ वर्षीया किशोरी कृशलाको ज्या’न लिएको आरोपमा ३ जना पक्राउ
फेरी सङ्क्रमणकै कारण अस्ताए यी बरिष्ठ नेता श्वासप्रश्वासमा गम्भीर समस्या भएपछि अचानक निमोनिया बढेर निधन
दिनभरी अर्कै केटा संग सुतेर आउथि राति एकलै सुत्थी,२ बर्ष सम्म मेरो श्रीमतीले मलाई छुन सम्म दिइन (1022)
हाम्रो सम्मानित अध्यक्ष हुनुहुन्छ केपी ओली, अब मिलेर एमालेलाई बलियो बनाउँछौं : भीम रावल (915)
शिल्पालाई सपोर्ट गर्दै प्रकाशलाई कडा जवाफ,कोहिलाई दारा निस्केको भन्यो कोहिलाई मानसिक समस्यामा पुरायो (भिडियो सहित) (751)
प्रचण्डलाई छोडेर एमालेमा फर्किएकी रामकुमारी झाक्री र योगेशले गरे यस्तो घोषणा (703)
३ वर्ष पहिले बुवाको मृत्यु, अहिले आमा ले पनि संसार छोडिन् : बिचरा यी नाबालक हरुको बिचल्ली (643)
रात दिन श्रीमानको शा रीरिक स म्प र्कको या तना सहन नसक्दा (634)
नायक किशोर खतिवडा आफुलाई गर्भवती बनाए भन्दै आरोप लगाउने लक्ष्मी गदाललाई भेट्न पुगे, भयो यस्तो बबाल (भिडियो हेर्नुस्) (586)
कन्चनको अस्पतालमा मृ,त्यु, बल्ल मुख खोलिन भा,वुक हुँदै अनिशाले वास्तविकता (भिडियो सहित) (571)
ओलीले राजिनामा दिंदै, ओलीकै प्रस्तावमा यी नेतालाई बनाउने भए प्रधानमन्त्री ! ओलीको यो प्रस्ताव अहिलेसम्मकै नयाँ ! (570)
जस्तो गुरु तेस्तै चेला हुन किशोर खतिवडा,लक्ष्मीको कुनै हैसियत छैन श्रीजना वाग्लेलाई जथाभाबी भन्ने (भिडियो सहित) (558)
कस्तो अचम्म ! यो बाख्राले घाँस होईन माछा खान्छ, भिडियो बन्यो भाईरल , हेर्नुहोस्
काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रवाट १२ जनाको ग्याङ पक्राउ ! पूर्व आईजीपीको घरमा गएर यस्तो गरेछन
छोराको सर्टिफिकेट लिन स्कुल गएका ४८ वर्षिया देबबहादुरको अरिंगालले टो’केर मृ*त्यु
यस्तो धन्दा गर्ने महिला प्रयोग गर्ने सामानसहित पक्राउ, उनको समान देखेर प्रहरी पनि छक्क परे !
जिउँदै श्रीमानलाई मृ’त्यु भयो भन्दै श्रीमतीले मलामी बोलाएपछि…..